Teacher Myanmar Data Science
Programming for Data Science. သင်ခန်းစာလေ့လာရန်ကြာချိန် စုစုပေါင်း ( 12 ) Hours. Programming for Data Science သင်ခန်းစာကို MYANMAR DATA SCIENCE မှသင်ကြားပေးထားပါတယ်…။သင်ကြားရတာအဆင်ပြေပါက ကြယ်ပွင့်လေးများဖြင့် Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
Laravel Inertia project (discussion forum)
Laravel Inertia ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် MyanmarBOC မှ စနစ်တစ်ကျ တင်ပြထားချင်သာဖြစ်ပါသည်။ #FullStack DEV
HTML Beginner သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCမှာ Enrollပြုလုပ်ပြီးလေ့လာသင်ယူပါ…
Python Programming အခြေခံသင်ခန်းစာ
June 8, 2020 / 16 Comments
Python Programming Language အခြေခံသင်ခန်းစာ
CSS Beginner Course ကို Myanmar Language ဖြင့် အဆင်ပြေပြေလေ့လာနိုင်ရန် MyanmarBOC မှတင်ပေးလိုက်ပါသည်။
Dart Programming Language သင်ခန်းစာ
Dart Programming Language lessons သင်ခန်းစာများကို Myanmar (မြန်မာဘာသာဖြင့်) သင်ကြားထားပါသည်။ Dart Programming Languageကို Appရေးပြီး Mulitple Platformများတွင် အသုံးများကြပါသည်။ Dart Programming Language ကိုgoogleက Devleopedပြုလုပ်ထားပြီး mobile, Desktop, server, web applicationsများမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။Dart Programming Language သင်ခန်းစာကို Ruby Learnerမှသင်ကြားပေးထားပါတယ်…။ သင်ကြားရတာအဆင်ပြေပါက ကြယ်ပွင့်လေးများဖြင့် Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် MyanmarBOCတွင်လေ့လာရုံတင်မက သင်ရောပါဝင်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သင်ကြားရန် လူကြီးမင်းတို့ လုပ်ငန်းများအတွက် Websiteပြုလုပ်ဖို့ ဆက်သွယ်ပါ။